नुन सबैभन्दा हानिकारक, प्रेसरका बिरामीलाई औषधिको रुपमा आलस - ज्ञानविज्ञान
हामी आवश्यकताभन्दा दश गुणाबढी नुन सेवन गरिरहेका हुन्छौं । चाहिने भन्दा बढी नुनको सेवनकै कारण वर्षमा चालीस लाख मानिसले जीवन गुमाउँछन् ।
रक्तचाप बढाउने एक कारक नुन पनि हो । उच्च रक्तचापका कारण मानिसको ज्यान जान्छ । मानिसलाई जति नुन आवश्यक पर्छ त्यो मात्रा त तरकारी र अन्य प्राकृतिक खाद्यवस्तुबाट प्राप्त भइरहेको हुन्छ । बाँकी हामीले तरकारीमा हाल्ने नुन त जीब्रोको स्वादका लागि मात्रै हो ।
एक अध्ययनअनुसार यदि हामीले नुनको अनावश्यक मात्रालाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने हृदयघातबाट ज्यान जाने जोखिम २२ प्रतिशत कम हुन्छ भने हृदयघात हुने सम्भावना १५ प्रतिशतले कम हुन्छ ।
हामी दैनिक आवश्यकताभन्दा १० गुणा बढी नुन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । नुन सोडियम र क्लोराइडबाट बनेको हुन्छ । यी दुई तत्वमध्ये सोडियमको काम शरीर बिगार्ने मात्रै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
जब तपाई नुन बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ, तब शरीरले त्यो अनावश्यक नुनलाई आफ्नो प्रणालीबाट बाहिरी निकाल्न जोर लगाउन थाल्छ । त्यो जोर लगाउने क्रममा शरीरले ब्लड प्रेसर पनि बढाउँछ । अन्ततः त्यही जोर नै ब्लड प्रेसर भन्ने बिमारी बनिदिन्छ ।
नुन भएको खानेकुरा खाएको ३० मिनेटपछि यसले शरीरमा हानी पुर्‍याउन थाल्छ । नुनले नशामा हानी पुर्याउँछ । शरीरमा नुन नहुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने अध्ययन गर्न वैज्ञानिकहरु नुन सेवन नगर्ने मानिसहरुको वस्तीमा पुगे ।
नुन नखाने अमेजनको बुढा रेड इन्डियनहरु प्रेसर जाँच्दा उनीहरुमा १००/६० पाइयो । जुन त्यहाँका वयस्कहरु बराबर नै थियो । हामी १२०/८० ठीक हो भन्ने ठान्छौं । खानपानमा मात्रै परिवर्तन गर्दा धेरै बिरामीहरुको प्रेसर १०५/८० मा अडिएको छ । पोल्ट्री सञ्चालकहरुले कुखुराको वजन कृत्रिम रुपमा बढाउँन सोडियम मिसिएको पानी कुखुरामा हाल्छन् । जसका कारण कुखुराको मासुमा आवश्यक भन्दा बढी सोडियम बस्छ । सेतो मासु भए पनि कतिपय अवस्थामा कुखुराको मासु पनि हानिकारक हुन्छ ।
उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेकाहरुमा हृदयघातको सम्भावना १५ प्रतिशतले कम हुन्छ । ज्यानै गुमाउने जोखिम यसले २५ प्रतिशतले कम गर्छ । विज्ञहरुले गरेको एक परिक्षणमा बिरामीहरुले खाने अन्नको मात्रा १० बाट घटाएर ३ मा ल्याइयो । जसले अनौठौ परिणाम दियो ।
अन्नको मात्रा घटाएपछि उनीहरुमा गरिएको परीक्षणमा के देखियो भने औषधि सेवन गरे बराबरको न्यून जोखिममा ती बिरामीहरु थिए । अर्थात यसले हृदयघातको सम्भावना औषधि सेवन गर्दा जति नै घट्यो ।
माछामासुको धेरै सेवनले उच्चरक्तचापको समस्या आउँछ । यसको मतलव माछा मासु खानै नहुने भन्न होइन । क्यानिफोर्नियामा ८९ हजार मानिसहरुमा गरिएको अध्ययनले एक अनौठो नतिजा बाहिर ल्याएको छ । ती मध्ये हप्तामा एक भन्दा बढी पटक मासु खाने मानिस भन्दा २३ प्रतिशत कम जोखिम महिनामा एक दुई पटक खानेमा देखियो । माछा मात्रै खाने मानिसमा उच्च रक्तचापको जोखिम ३८ प्रतिशत कम देखियो ।
माछा र मासु दु्वै नखानेमा यस्तो जोखिम ५५ प्रतिशतले कम भयो । माछामासु, अण्डा र डेरी उत्पादन छाडन् मानिसमा रक्तचापको जोखिम ७५ प्रतिशतले कम भयो । यसबाट के देखिन्छ भने जनावर वा पशुपंक्षीबाट प्राप्त हुने खाद्यवस्तुले उच्च रक्तचापको जोखिम बढाउँछ ।
तपाईको रक्तचाप माथि १४७ र तल ११५ छ भने तपाईले औषधि खानै पर्छ । एक बृहद अध्ययनका क्रममा के देखियो भने केही चम्चा आलस वा आलसको धुलो नियमित सेवन गर्ने हो भने तल १५ पोइन्ट र माथि ७ पोइन्ट रक्तचाप आफै कम हुन्छ । अर्थात माथिक १४७ र तल ११५ हुनेले नियमित आलस सेवन गर्दा औषधि खान नपर्ने लेभलमा ब्लड प्रेसर आउन सक्छ । १४० र ९० भनेको प्रेसरको सीमा हो । यो भन्दा माथि भयो भने मात्रै औषधि सेवन गर्नुपर्छ । यो मात्रा भनेको दिनहुँ एरोविक गर्नुभन्दा दुई गुणा बढी प्रभावकारी देखियो ।
Don't Miss it कथा : कण्डम – किशोरवस्था मनोविज्ञानमा आधारित
Up Next आखा किन फरफराउछ ? के तपाईको आखा बेस्सरी चिलाउने गर्छ ? यसरी आखाको हेरचाह गर्नुहोस्
घरेलु उपचार, फिचर्ड
केरा अर्थात सदाबहार फल । बजारमा केरा बाह्रैमास पाइन्छ । कसैलाई कमजोरी भयो र तत्काल इनर्जी चाहियो भने एउटा केरा…
पेट सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचार ! शेयर गर्नुहोस्, कसैलाई काम लाग्न सक्छ ।
दिसा वा मलमुत्र त्याग राम्ररी भएपछि ज्यान हल्का हुन्छ । सजिलै र राम्ररी मल त्याग हुनु भनेको स्वस्थ्य हुनु पनि…
फिचर्ड, व्यक्तित्व विकाश
गर्मीमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ?
गर्मीमा र सामान्य मौसमा छालाको स्याहार गर्ने तरिका फरक हुन्छ, एउटै उपायले काम गर्दैन । विशेष गरी गर्मी मौसममा सूर्यको…
के तपाईलाई थाहा छ श्री कृष्णको मृत्यु कसरी भयो ? थाहापाउनुहोस्
यो एउटा जिज्ञासा र आश्चर्यको विषय नै हो कि भगवान कृष्णले मानव रुप छोडेपछि के भयो? पाण्डवहरु के भए ?…
यार्सागुम्बा अर्थात जडीबुटीको राजा, के छ यसको उपयोगिता ? जानिराखाैँ
यार्सागुम्बा भनेको हिमाली भेकमा पाइने ढुसी र झुसिल्किरा एकै ठाउँमा जोडिएर रहेको बस्तु हो । यसमा ढुसी र झुसिल्किरा परस्परमा…
अनुपम थियो, त्यो दिन । कौतुहलताले भरिएको मेरो दिमागलाई शान्त पार्न सक्ने एक अत्यन्त उपयुक्त र सुनौलो मौका। मैले सोचेजस्तो…
गहुँबाट बन्ने आटा राम्रो, मैदा किन हानीकारक ? यी हुन् भित्री कारण
एउटा ठट्यौली छ, ‘रेष्टुरेन्टको मेनु जति हरेेपनि आखिरमा हामीले माग्ने खानेकुरा भनेको मम र चाउमिन हो ।’ खाद्य बजारले पनि…
व्यावसायिक कुरिलो खेती प्रविधि
कुरिलो एक बहुवर्षीय तरकारी बाली हो । यसको खेती न्यानो र समशितोष्ण हावापानी भएको खासगरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलतासाथ गर्न…
घरेलु उपचार (4)
भान्छामा औषधी (2)
व्यक्तित्व विकाश (2)
संस्कृति परम्परा (3)